Geessituu DDE, isa ati yeroo fedha keetti karraa maqaa ramadameefiitiin harroomsuu dandeessu sanaa, galmee kee keessatti saaga.
Lakkoofsa dhabaataa, yk bu'aa foormulaa tokkoo saaga.
Gegeedaramaa yk Dirree Fayyadammaa tokkoof gatii haaraa saaga.
Gegeedaramaa fuulaa qindeessi
galmicha keessaa qixa wabii, bakka itti lakkaawumsa fuulaa debi'ee lamka'u saaga. Qixa wabii jiraachisuuf "Banaa", dhabamsiisuuf ammoo, "Dhaammaa" filadhu. Akkasuumas lakkaawumsa fuulaa lakkoofsa biraatti eegaluuf iddoodaa galchuu nidandeessa.
Lakkoofsa fuulawwanii, qixa wabii "Gegeedaramaa fuulaa qindeessii" irraa gara dirree kanaatti agarsiisa.
Gegeeddaramaa xurgbee maamiloo tokko saaga. Dirree Fayyadamaa, akka hima otoolaa tokkoof gegeeddaramaa murteessutti fayyadamuu dandeessa. Yeroo Dirree Fayyadamaa jijjiirtu, akka-fakkiin gegeeddaramticha martii galmee keessaa niharoomu.